Jubbaland oo ka falcelisay shirka uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Jubbaland oo ka falcelisay shirka uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo
Jubbaland oo ka falcelisay shirka uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo
Maamulka Jubbaland ayaa soo dhaweeyay shirka uu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isugu yeeray Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, si looga wadahadlo khilaafka raggaadiyay arrimaha doorashooyinka ee dalka.
Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Madaxtooyada Qaranka waxaa shirka lagu qaban doonnaa Magaalada Samareeb (Ex Dhuusamareeb), 1-da illaa 3-da bisha soo socoto ee February.
Wasiirka Warfaafinta Jubbaland, Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa sheegay in shirka uu ku baaqay Madaxweynaha uu yahay mid soo daahay, oo mar hore loo baahnaa in la qabto.
“Horta markaan anagu liiskii gudbinay ayay Jubbaland iyo Puntland ku baaqeen in 30-ka bisha shir leeskugu yimaado, haddii Madaxweynaha Jamhuuriyadda uu ku baaqay in shirka leeskugu yimaado 1-da illaa 3-da, waa shir loo baahnaa in mar hore la qabto oo soo daahay, aan u arkeynay in mar hore xalka la raadiyo, marka wax wanaagsanaa u aragnaa.” Ayuu yiri Wasiirka oo la hadlay BBC.
Su’aal ahayd in Jubbaland arrimaha taagan ay weli meesheedii ka taagan tahay iyo inay tanaasul sameynayaan ayaa wuxuu sheegay in shirka looga hadli doono qodobadii taagnaa ee fulinta heshiiskii 17-kii bishii September ay madaxdu ku wada gaareen Magaalada Muqdisho.
“Koley Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Dowladda Federaalka kulli waa leeskugu imaan doonnaa, qodobadii taagnaa ee sidii shirkii September 17, loo fulin lahaa uun baa laga wadahadli doonnaa.” Ayuu yiri Wasiirku.
Wasiirka ayaa yiri “Waxaana rajeyneynaa in leesla afgarto wixii sharciyan xaqa loo leeyahay, haddii ay noqoto Guddiga Doorashooyinka, haddii ay noqoto qaybtii Gobolada Waqooyi iyo haddii ay noqoto xaaladda Gobolka Gedo.”
Mar wax laga weydiiyay liiskii Jubbaland ku soo saartay Xubnaha Guddiga Doorashooyinka ku metelaya, ee ay Dowladda Federaalka ku sheegtay inaanay waafaqsanayn nidaamka ayaa taasi ku sheegay mid uun muddo kororsi looga dan leeyahay.
“Taasi waxaan u maleynayaa waa waqti dheereysi iyo kordhin uun bay uga dan leeyihiin, haddii wanaag loo jeedo cid walba way aragtay, Beesha Caalamka way soo dhaweysay, adduunweynaha oo dhan wuu soo dhaweeyay. Marka taasi waa uun xujo oo caqabadihii nasoo haystay ka mid ah, waxba hadda kama hordhaceyno.” Ayuu yiri Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed, Wasiirka Warfaafinta Jubbaland.
Si kastaba ha-ahaatee Madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa Isniinta berrito lagu wadaa inay isugu taggaan Magaalada Dhuusamareeb.
Previous articleXiisad weli ka taagan Degmada Beled Xaawo
Next articleQM oo soo dhaweysay shirka uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo